Al Shabaab oo 5 ruux ku toogatay duleedka Baydhabo
BAYDHABO, Soomaaliya - Kooxda Al Shabaab ayaa shan nin oo ay ku eedaysay basaasnimo ku toogatay duleedka magaalada Baydhabo, ee xarunta gobolka Baay.
Shanta qof oo lagu kala magacaabayay Mahad Cali Xasan, Jibriil Saalax Xaaji, Mahad Cabdi Axmed, Maxamed Cali Aadan iyo Cabdicasiis Ibraahim ayaa waxaa lagu toogtay meel fagaaro ah oo ku yaalla deegaanka Iidaale, oo 60KM dhanka Koonfur uga beegan Baydhabo.
Qaadi katirsan Maxkamadda Al Shabaab ayaa shaaciyay in raggan la dilay ay uu shaqeynayeen Hay'adaha Sirdoonka Mareykanka, Dowladda Federaalka, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, iyagoo xogta uga soo gudbin jiray deegaanada ay maamulaan.
Boqolaal dadweyne ah oo isagu jiray rag, dumar iyo caruur ayaa usoo daawasho tagey toogaashada shanta nin ee Al Shabaab kusoo eedaysay jaajuusnimada.
Inta badan, Al Shabaab ayaa deegaanada ay maamusho waxay ka fulisaa dilalka noocan ah, iyadoo aan jirin qareeno madax-banaan oo ay u qabato dadka ay kusoo eedayso basaasnimada, xatooyada iyo kufsiga.
Roobow oo ka dagay Kismaayo [Qorshihiisa]
Soomaliya 13.12.2017. 20:44
Mukhtaar Roobow Cali "Abu Mansuur" Afhayeenkii iyo hogaamiye ku xigeenkii hore...
Maxaa loo aamini la'yahay Mukhtaar Roobow?
Soomaliya 14.12.2018. 23:56
Roobow oo ku adkeysatay ka qaybgalka doorashada KG
Soomaliya 08.10.2018. 14:39
Qarax culus oo ka dhacay gobolka Baay iyo wararkii u dambeeyay
Soomaliya 15.07.2018. 14:17